लिंग परिवर्तन गरेर खुसी छु! - Movies Trends
लिंग परिवर्तन गरेर खुसी छु!
ठिकै छ भन्नुपर्यो ।
म उठ्नै सकिनँ । दुई दिनसम्म हस्पिटलको बेडमै बस्नुपर्यो ।
छैन । जसरी पनि चलचित्र खेल्नुपर्छ भन्ने थियो भने म खेलिसक्थें । मैले भोजपुरी चलचित्रमा काम पनि गरिसकेकी छु । अफर आयो भने खेल्छु तर जसरी पनि खेल्नै पर्छ भन्ने मरो चाहना छैन । बाह्रखरीबाट
सहसचिव बढुवामा सिफारिस २२ उपसचिव